REVODE105 ingenye uhlobo PLA Ushintshe okuyinto lenzelwa simunyangaso esobala.
Properties of REVODE105
PLA resin REVODE105 zezindlela zokuhlola
Ubuningi (g / cm3) 1.25 ± 0.05 GB / T1033-1986
Melt ukugeleza rate (g / 10min, 190 ℃ / 2.16Kg) 3-8 GB / T3682-2000
lokushisa Ukushisa ukuhlanekezela (℃) 60
Udini ukuncipha isilinganiso (ncibilika parallel ukugeleza isiqondiso) 0,005 ISO294-4: 2001
Udini ukuncipha (ncibilika mpo ukugeleza isiqondiso) 0,003 ISO294-4: 2001
amandla eqine (MPA) 45-60 GB / T1040-2006
Ukunwebeka ngesikhathi sekhefu (%) ≥ 10 GB / T1040-2006
amandla Impact (KJ / m2, Izod) 3 GB / T1043-2008
I PLA resin REVODE105 kufanelekile ukucutshungulwa simunyangaso ukushisa ukumelana futhi esobala non iqonde, asifanele simunyangaso lwalugobile.
Resin REVODE105 zingahlungwa ku bendabuko polypropylene (PP) utshani extrusion udini umshini. Lapho ekucubunguleni, sicela uqaphele:
Mina: I processing lokushisa (lokushisa ethize kumele elungiselelwe):
Shisisa engxenyeni yokuqala (eduze okuphakelayo emphinjeni): 130-150 ℃, nezinye izigaba: 160-180 ℃ PLA resin REVODE105 iqala encibilika ashisa ngaphezu 60 ℃, uma izinga lokushisa eliphezulu kakhulu emphinjeni yokudla kuholela resin agglomeration kanye nokuncelisa unsmooth, kutuswa uthele amanzi ukupholisa ku jacket ekondleni emphinjeni sigaba.
Ngenxa REVODE105 ziyaqothuka ezingaphezu kuka bendabuko PP resin, emikhawulweni yomibili zingase zephule lapho ukusika ipayipi. Kunconywa ukulawula izinga lokushisa lamanzi in tank amanzi kuka-35 no-40 ℃, ukuqinisekisa ipayipi has lokushisa eliphezulu lapho ukusika, ngaleyo ndlela sigweme kwemifantu lula.
II: Umbala kwendingilizi
Uma umkhiqizo kufanele ezinemibala, qiniseka ukusebenzisa ekhethekile umbala toner noma PLA ezisekelwe umbala master batch. toner esingalungile noma umbala master batch kungaholela umkhiqizo ziyaqothuka, unsmooth umkhiqizo ebusweni ngisho ayikwazanga extrude.
Uma umbala kwendingilizi izinto ayikwazi ukusetshenziswa phakathi kwamahora angu-2, kunconywa Ungasebenzisi 25 kg / isikhwama resin konke ngesikhathi esisodwa, esikhundleni, sebenzisa ingxenye yako, unamathelise enye ingxenye nedivaysi ashisayo ukubekwa uphawu ngesikhathi esisodwa. Inhloso adalule ngezinto zawo ezibonakalayo ukuze emoyeni njengoba short ngangokunokwenzeka.
REVODE105 icutshungulwe nge iphele crystallization, futhi okuqukethwe umswakama lingaphansi than400 ppm. Resin ukuthi agcinwe esikhwameni Aluminium ucwecwe, ivikelwe ibhokisi noma esikhwameni ngaphandle ingasetshenziswa ngqo. Gcina iphakethe uphawu kuze isilungele ukusetshenziswa futhi ngokushesha reseal iyiphi impahla engasetshenziswanga, noma resin ngeke amunca umswakama. Ngemva kuka-, resin zingase ziveze ukuhamba lenyuke ngesikhathi senqubo, futhi imikhiqizo kungase kudingeke impahla ziyaqothuka, ebusweni ukuncipha. Uma resin wadalula emkhathini ngehora ezingaphezu kwesisodwa, kufanele kabusha omisiwe ngaphambi kokusebenzisa, ngenye indlela, resin ingasetshenziswa ngqo. The kungenzeka iyavuleka umswakama ungakheka akufanele ushiywe, uma resin wadalula emkhathini nge umswakama eliphezulu.
Lapho kabusha iphele resin, emoyeni un-dehumidified ashisayo asivumelekile, ngoba ngaphandle dehumidifier, hhayi kuphela ukusebenza omiswe ngeke kutholakale, kodwa futhi ijubane amanzi absorbance of PLA resin kungenziwa ngesivinini esikhulu. Umoya dehumidified kungaqinisekisa umphumela omiswe PLA resin e desiccator. Uma usebenzisa kuhhavini jikelele, imishini dehumidification okufanele isetshenziswe dehumidify emoyeni oven.SD-H uchungechunge lezinyosi-namasondo angu uhlobo dehumidifiers olunikezwe yi Shini Pla stics Technologies Inc. yabafile Kunconywa PLA omiswe, nezinye Equipments efanayo umphumela dehumidified zingabuye zikhethwe.
izimo omiswe ejwayelekile ziboniswa kulelithebula lelingentasi:
omiswe sepharamitha Amasethingi ejwayelekile
Residence Isikhathi (amahora) 2-3
Air lokushisa (℃) 80 (lokushisa ka kuhhavini evamile)
Air Dew Point (℃) -40 (lokushisa ka dehumidifier)
Air Flow Rate (m3 / ihora-kg resin) > 1.85
Vala ahlula ezansi le hopper usithethelele emgqonyeni lapho ukucisha umshini isikhathi emifushane (ngaphakathi 30 amaminithi), ukugwema Ukuvinjwa womphimbo okuphakelayo. Vula ahlula sondle resin emva eqinisekisa kabusha uqale umjovo.
Uma umbala ukushintsha futhi ukubola kwenzeka phakathi kwenqubo ukubumba, lizahlambulula umgqomo ngokushesha ukuze bagcine isimo impahla. Keep on egijima uma into kuyinto evamile, noma ulungise nemingcele.
ukuphathwa yokutakula materials uvuseleleke:
Imikhiqizo elingagunyaziwe akhiqizwa revode105 inqubo ukukhiqizwa zingahlungwa futhi kusetshenzwe ngohlelo olusha materials.The Ingxenye kwalokho akufanele ibe nkulu kakhulu, kungenjalo umkhiqizo kuyoba ziyaqothuka kakhulu.
I zasebenza ungelashwa ngezindlela ezimbili ezilandelayo:
Ngo inqubo ukukhiqizwa, kuba ngqo comminuted futhi udlulisele kuya hopper esebenzisa othomathikhi izinto ezintsha feeding.The kuyinto ukusetshenziswa okuxubile, kodwa kudingeka uqinisekise ukuthi izinga lokushisa ebhakedeni Izinga hhayi ephakeme kuka-60, ngaphandle kwalokho kungase kube impahla okunamathelayo ( imodi letiphakanyisiwe ukusetshenziswa)
Okulandelayo: 60gsm White Kraft Paper Roll Ukuze Paper Utshani
Anti mbumbulu Hologram Intambo
okuzenzakalelayo lokuvungula Packing Machine
Baby Ukotini efihlekile
Baby Indlebe yokuhlanza
okubolayo yilawo manzi Plastic Raw Material
kushisa ukubekwa uphawu Packing Machine
Ukotini Indlebe efihlekile
ukotini swab Sticks
Indlebe Yokuhlanza Stick Ukotini Bud
Okugcwele okuzenzakalelayo Impahla Machine
Kraft Liner iBhodi
ulethisi Ukupakisha Machine
Makeup Ukotini efihlekile
Yemvelo / Buff Color
Elisemqamelweni Ukupakisha Machine Inani
Pla Resin Ukuze Injection Ibanga
Pla Resin Ngo ubunzima okuphezulu
Plastic Stick ukotini swab
polypropylene Indwangu Manzi
Kk Nokwelukiweyo Indwangu
Raw Izinkuni Umtfumbu zekhadibhodi Gray
Single lokuvungula Packing Machine
Spark Imigudu Packaging Machine
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Ukuphrinta
Iwayini Impahla Tube
Ngokhuni Plastic Stick ukotini swab